Sunday June 18, 2017 - 05:16:18 in Maqaallo by Super Admin
Axmed Ismaaciil (Qaasim) waa kii lahaa: " Isma doorin gaalkaan diray iyo daarta kii galay." Waxa ka dambeeyay rajiimkii dhiigya cabka......
Axmed Ismaaciil (Qaasim) waa kii lahaa: " Isma doorin gaalkaan diray iyo daarta kii galay.” Waxa ka dambeeyay rajiimkii dhiigya cabka oo dulmigii Somaliland tirsanaysay waliba ugu sii daray xabad iyo xasuuq xataa waxa lagu tilmaamay in ay yihiin Yuhuud ku dheeraad ah gobolka sidaa daraadeed dadweynaha Somaliland taariikhda marnaba may arag dawlad iyaga la dareen ah.
Si kastaba ha ahaatee cadaadiskii iyo dulmigii isbiirsaday wuxuu horseeday gadood ama kacaan dadweyne si looga xoroobo gumaysiga Xamar. Markan Maxamed Ibraahin (Hadraawi) waa kii lahaa: "Hargaysi ma toostay, harqoodka ma tuurtay, waxay hibanaysay hagaag ma u sheegtay.” In kasta oo dhibaatada dadka soo gaadhay la koobi Karin, waxa la gaadhay guushii waxaana si xun loo jabiyay digtaytarkii kibray iyo ciidamadiisii isla wayna.
Haddaba Akhriste markuu hoggaanku asqoobo maxaad ka fili karta bulshadii la hoggaaminayay? Dabcan iyaguna waa in ay wajaqmaan. Tusaale kooban: xasharaadka qaar ka mid ah marka ay meel ka guurayaan waxa hor gala mid iyaga ka mid ah oo malaha Madaxweynahooda ah, haddii uu dayoobo ama carqalad kale uu la kulmo hore uma socdaan dibna uma noqdaan, Goobtii ayuun bay isku meeraystaan. Sidaas oo kale waxa ka dhigan shicibka Somaliland oo markii hoggaankoodi dhinacna u wadi waayay bilaabay in ay iska daba wareegan. Waxay talo iyo miciin moodeen shir beeleedyo lagu sheegayo in reerku ama reeruhu aayahooda kaga tashanayaan. Haddaba tolow yaa u sheega in bulshada Somaliland dooni qudha dusheeda wada saaran tahay, masiirkooduna mid yahay. Maxaad se ula yaabi waxa ku dhacay anfariir iyo u qaadan waa (shock) waayo marnaba may filayn in madaxdii ay doorteen iyo inamadoodii ka caddaalad xumaadan ama ka musuqmaasuq bataan